दाउन्ने देवीले सबैको कल्याण गरुँन ! हेर्नुहोस राशिअनुसार वैशाख १७ गते बुधबारको राशिफल - नमुना पोष्ट
नमुना पोष्टप्रकाशित मिति: २०७७ बैशाख १६, मंगलबार (१ साल अघि)
वि.सं.२०७७ वैशाख- १७,बुधवार, ई.सं.२०२० अप्रिल-२९ , शक संवत्-१९४२,नेपाल संवत्-११४० बछलाथ्व,प्रमादी संवत्सर वैशाख शुक्लपक्ष तिथि-षष्ठी , ११:२१ बजे उप्रान्त सप्तमी,नक्षत्र-पुनर्वशु , २२:२५ बजे उप्रान्त तिष्य,योग-धृति , १८:४३ बजे उप्रान्त शूल,करण-तैतिल ११:२१ बजेदेखि गर , २२:५२ बजे उप्रान्त वव,चन्द्रराशि-मिथुन,आनन्दादि योग-गद, दिनमान – ३२ घडी ४९ पला िगंगोत्पत्ति, गंगा सप्तमी।
मेष ( चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) –
आट तथा पराक्रम बढेर जानेछ । दाजुभाई तथा आफन्त बाट सहयोग पाईने तथा आत्मियता बढेर जानेछ । उत्पादित उद्योगमा गरेको लगानिबाट घाटा लाग्नेछ । माया प्रेममा सामिप्यता बढेर जानेछ । साझपख आफन्त तथा आमासँग मनमुटाव हुनेछ । वाहिरी वातावरण तथा सरसफाईमा ध्यान दिनुहोला।
मिथुन (का,की,कू,घ,ङ,छ,के,को,हा ) –
नयाँ नयाँ प्रेम प्रस्ताव आउँने तथा माया प्रेममा आफ्नो मायालुलाई आफ्नै आखाँको वरिपरि देख्न पाउँदा मन खुसि हुनेछ । स्वादिष्ट भोजन ग्रहण गर्ने अवसर जुर्नेछ । समाजमा मान सम्मान तथा ईज्जत प्रतिष्ठा बडेर जानेछ । अध्ययन तथा अनुशन्धानको क्षेत्रमा ठुलो प्रगति गर्न सकिनेछ भने सबैतिरबाट तपाईको काममा सहयोगको हुनेछ । आफ्नो सिर्जना अरुले मन पराई दिनाले मन प्रशन्न रहनेछ।
माया प्रेमको बन्धन कसिलो हुँनुको साथै दाम्पत्य जिबन सुखि रहनेछ । ईच्छित चाहानाहरु पुरा हुनेछन् भने सवारि साधन प्राप्तिको योग रहेको छ । औषधीजन्य तथा खाद्यान्नसँग सम्वन्धीत सामानको खरिद बिक्रीमा वृद्धि हुनेछ भने अन्य सामानको व्यापारमा मन्दि आउँने तथा घाटा लाग्नेछ । स्वास्थ्य सम्बन्धि साना तिना समस्याले भने सताउने देखिन्छ।
पढाई लेखाईमा अरुलाई पछि पारि नतिजा आफ्नो पोल्टोमा पार्न सकिनेछ । आफन्त तथा परिवारका साथ मिष्टान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । औषधीजन्य तथा खाद्यान्नसँग सम्वन्धीत सामानको व्यापारमा वृद्धि हुनेछ भने अन्य सामानको व्यापारमा मन्दि आउँने तथा घाटा लाग्नेछ । तरपनि वाहिरी वातावरण तथा सरसफाईमा ध्यान दिनुहोला।
पढाई लेखाईमा मेहनेत गरे भन्दा राम्रो नतिजा हात लाग्ने हुँदा मन प्रशन्न हुनेछ । समयमा काम बन्ने हुनाले अन्य क्षेत्रमा लगानि गर्ने बाताबरण बन्नेछ । माया प्रेममा रमाउँन चाहनेहरुका लागि समयले साथ दिनेछ । बिधिन्न भौतिक तथा बिलाशि बस्तुको प्रयोग मार्फत अरुको मन लोभ्याउँन सकिनेछ । साझपख यात्रा गर्दा ध्यान दिनुहोला।
खर्च बढेपनि उपलब्धिमुलक कामहरु हुनेछन् । बिवादित बिषयहरु आफ्नो पक्षमा फैसला हुनेछन् भने सत्रुहरु आफै किनारा लाग्नेछन् । आफन्त,मित्र तथा मावलि पक्षबाट तपाईको बौद्धिकतालाई सम्मान गर्ने तथा नयाँ काम गर्न खोज्दा सहयोग हुनेछ । माया प्रेम तथा रोमान्सको क्षेत्र स्वत स्फुर्त बलियो बन्ने योग रहेकोछ।
अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा भनेजस्तो प्रगति हुँने हुँदा आफन्त तथा गुरुवर्गहरु खुसि हुनेछन् । सन्तान तथा आफन्तहरुले तपाईलाई साथ दिनेछन् । माया प्रेममा रमाउँन चाहनेहरुका लागि आजको समय उत्तम रहेकोछ । खानपानमा ध्यान दिनुहोला सामान्य स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्या आउँन सक्छ।
दाउन्ने देवीले सबैको कल्याण गरुँन ! हेर्नुहोस राशिअनुसार वैशाख ०७ गते आईतबारको राशिफल